About | Somaliland Voice
Idaacadda Codka Shacabka Somaliland.
Idaacadda codka Shacabka Somaliland waa Idaacad cusub oo ku soo biirtay Warbaahinta Somaliland, waxaana aad habeen kasta 10:00 fiidnimo ee xiliga Geeska Afrika si toos ah ugala socon doontan mowjadda tirsigeedu yahay 7325 kilohertz, iyada oo a ku jiriri doon ilaa iyo 10:30 habeenimo.
Idaacada Codka Shacabka Somaliland waxa ay dadweynaha Somaliland u soo gudbin doonta wararkii ugu danbeeyay oo xaqiiqada ku dhisan, Barnaamijyo xul ah iyo Suugaan kala duwan.
Ujeedooyinka Idaacada codka shacabka Somaliland loo furay wax ka mid ah:
Bulshada Somaliland waa mujtamac ku hoos nool Qaran Dimuquraadi ah, wuxuu distoorka Jamhuuriyadda Somaliland cadaynayaa in Saxaafada iyo Warbaahinta kale ay ka mid yihiin Xoriyaadka aasaasiga ah ee ra’yi dhiibashada oo ay leeyihiin Madax-bannaani dooda islamarkaana ay reeban tahay talaabo kasta oo lagu cabudhinayo.
Muwaadin kasta oo u dhashay Somaliland waxa uu xaq iyo xuquuq lama taabtaan ah u leeyahay inuu helo Warbaahin uu kala socdo wixii war iyo wacyi-gelin ah ee saamayn ku leh Noloshiisa,Deegaankiisa iyo Guud ahaan dalkiisa.
Warbaahinta Madaxa bannaani waxa ay tahay in ay door mug leh ku yeelato dhismaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland.
Sidaa daraadeed, Idaacadda Codka Shacabka Somaliland waa mid ka turjunta baahida dadweynaha Somaliland, waana mid soo bandhigi doonta dhacdooyin, warar iyo barnaamijyo xaqiiqada ku salaysan.
Idaacadda Codka Shacabka Somaliland waa mid dhexdhexaad ah oo ay u siman yihiin xisbiyada qaran ee Somaliland ka jiraa.
Waxa ay Idaacadu ilaalinaysaa wax kasta oo saamayn kuyeelan kara nabad galyada, degenaanshaha iyo xasiloonida Somaliland caanka ku tahay.
Waxa kale oo ay Idaacadan Codka Shacabku u hadlaysaa dadka aan Hadal kooda la maqal ee Somaliland ku nool.
Idaacada Codka Shacabku Waa fikir ka dhashay in dalku yeesho Idaacado Madaxbannaan, sida uu Maanta u leeyahay Telefeeshino, wargaysyo, iyo mareegaha internetka ee madaxbannaan.
Idaacadu Waxa kale oo ay fursad siin doonta xisbiyada Qaranka oo ah laf dhabarta siyaasadda Dalka, iyada oo hadda lagu jiro xili kala guur ah oo xaasi ah oo filaayo in ay dhacado doorashadii madaxtinimada Dalka oo loo tartamayo xilka Madaxwayne iyo Madaxweyne ku xigeen ee shanta sanno ee socota.
Dhagaysteyaal hadii aad ku sugan tahay deegaamada kala duwan ee Somaliland, nala soo socodsii qaabka uu kuu soo gaadhay Maqalka Idaacada Codka shacabka Somaliland, adigoo wixii macluumaad ah noogu soo hagaajin kara email-ka ah info@somolilandvoice.co.uk, sidoo kale hadii aad dhagayste ku sugan tahay Somaliland ama waddamada Bariga Afrika waxa aad Idaacadda ka dhagaysan kartaa Mawjada dhererkeedu yahay 7325 kHz.
Waxa kale oo aad si toos ah ugala socon kartaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa Idaacadda bartan internet-ka ee www.somalilandvoice.co.uk.